Ukuxuba iZiselo laMandla kunye noTywala kunyusa umngcipheko wengozi | Amadoda aQinisekileyo
Ixesha elide ukuba kuyimfashini ukudibanisa iziselo zamandla notywala, ngakumbi kubathengi abancinci. Ukuba sisela lo mxube rhoqo, imingcipheko esele iselwayo inokwanda nangakumbi.
Esinye isiphumo esenzekayo, esinokuvela iingozi ezingakumbi emzimbeni wethu, yimvakalelo yokufihla ukunxila. Iziphuzo zamandla zinayo Iziphumo zokufihla ukuqonda kwakho ukuba utywala obuninzi butywala. Ke ngoko, umntu uyaqhubeka nokusela.
1 Iziphuzo zamandla ngumsindo
2 Uphuhliso oluqhubekayo kwimarike
3 Ezinye izinto eziyingozi, ezingezizo utywala
Iziphuzo zamandla ngumsindo
El ukusetyenziswa kweziselo zamandla kuya kusanda. Asingobantu kuphela abadlala imidlalo, iimbaleki, abadlali abaqeqeshiweyo, njl., Abafuna ukusebenza ngcono. Inani eliphezulu labantu abancinci lifuna "iziphumo eziphezulu" loo nto ifunyanwa ngokudibanisa utywala kunye neziselo zamandla.
Phakathi kwezinto ezinobungozi obuninzi, kwaye ngexesha elifanayo kakhulu kusetyenziswa, yi-caffeine. ICaffeine kwezinye iziseloNjengokuba kunjalo kwiziselo ezinxilisayo ze-cola, kunye negesi ephuma kwezi zidityanisiwe, xa zixutywe notywala, zenza ulwalamano lomzimba wethu.
Uphuhliso oluqhubekayo kwimarike
Iinkampani ezininzi zeemveliso ezisekwe kwiziselo zamandla eYurophu naseMelika, zisungula ngokusisigxina imixube emitsha yeziselo zamandla notywala. Singazifumana ezi zinto zotywala kwii-hypermarket, kwiivenkile zotywala, njl.
Simelwe kukuba njalo siyabazi ubungozi empilweni yethu ukuthatha ezi mveliso kwaye, apho kufanelekileyo, ukwenze oko ngononophelo olukhulu kunye nobungakanani obuncinci.
Ezinye izinto eziyingozi, ezingezizo utywala
Zeziphi izinto ezinobundlobongela ezaziwa njenge "Iziselo zamandla"? Ezi ziimveliso ngokubanzi ibhotile okanye enkonkxiweyo ngaphandle kotywala, Ezibandakanya phakathi kwezinto zalo ezinye izinto ezifana ne-taurine, i-caffeine, i-guarana, i-ginseng, i-glucuronolactone, i-theine, iswekile okanye izinto ezithatha indawo yazo, iivithamini, izimbiwa, i-inositol kunye ne-carnitine.
Izizathu zokuba sigale ezi zinto zihambelana Ukufuna ukwazi, ukufuna iimvakalelo, ukuzama izinto ezintsha, Njl
Imithombo yemifanekiso: imizuzu engama-20 / ngcono ngeMpilo /
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Ukutya » Umngcipheko wokuxuba iziselo zamandla notywala
Into ekufuneka siyithathele ingqalelo entwasahlobo yempilo yethu